Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Nicolo Barella Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Nicolo Barella Biography na-agwa Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Akụkọ mmalite, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị tụgharịrị Nwunye (Federica Schievenin), Childrenmụaka (Rebecca, Lavinia na Matilde), Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Worth.
N'okwu dị mfe, anyị na-ewetara gị akụkọ ihe mere eme nke Nicolo Barella. Anyị na-egosipụta njem ndụ ya, site na mmalite ụbọchị, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịmma gị na-enye gị nsogbu, ebe a ka ụmụaka si na nwata gaa na ebe ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Nicolo Barella's Bio.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Nke Na-adịghị Eke
Biography nke Nicolo Barella - daysbọchị nwata ruo mgbe ọ ghọrọ Ọganiihu.
N’enyeghi obi abụọ, mụ na gị ma ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma na Europe. N'agbanyeghị otuto a, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Life of Nicolo Barella. Anyị akwadebela ya ma ọ na-atọ ụtọ. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Nicolo Barella Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, ndị Fans na-akpọ ya aha “Transistor Radio”. Nicolo Barella mụrụ na 7th nke February 1997 nna ya, Luca Barella, na nne ya na Cagliari, Italy. Tali bịara n'ụwa dị ka ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya ndị a hụrụ ebe a.
Zute nne na nna Nicolo Barella - Mr na Mrs Luca Barella. You chọpụtala na ya na papa ya yiri nnọọ?
Nwa nwoke a nwere obi uto iso ezigbo nwanne ya nwanyi (Martina) nọrọ ezigbo oge. N'oge a, obere Nicolo na-elekọta ya mgbe ọ bụla nne ya na-arụ ọrụ ụlọ. Le, gallery nke nwanne nwoke na nwanne nwanyị zuru oke. Siblingsmụnne abụọ (Nicolo na Martina) dị ka a hụrụ ebe a, hụrụ ibe ha n'anya n'oge ha bụ nwata.
Dika umuaka, Nicolo na Martina bu ezigbo ndi enyi.
Bọchị Na-eto Eto:
Dịka nwatakịrị, onye na-eme egwuregwu na-arapara n'ahụ nna ya, bụ onye kekọtara mmasị na football. N'aka nke ọzọ, nne ya enweghị mmasị n'echiche na o tinyela 100% anya na bọl. O doro anya, ọ chọrọ ka ọ gbaa basketball. Agbanyeghị, mama Barella ga-agbanwe ike ya na ụbọchị ndị sochirinụ ka ọ na-akwado ya na mbọ ya.
Nicolo Barella Ezigbo Ezinụlọ:
N'ụzọ na-akpali mmasị, nwa okorobịa Italiantali enwebeghị nsogbu n'oge ọ bụ nwata. N'ihi ezinụlọ nke ụlọ ya, Barella enweghị nchegbu banyere ọdịmma ya. N'ezie, ndị mụrụ ya nyere ya ezigbo nri ma mee ka ọ gaa ụlọ akwụkwọ mmuta bọọlụ dị mma na gburugburu ha.
Nicolo Barella Ezinụlọ:
O doro anya na, ebe a mụrụ ya bụ isi obodo nke agwaetiti Sardinia, nke a maara maka ọdịiche dị iche iche nke Art Nouveau.
Ebere ha sitere na isi obodo Cagliari. Ọ bụ Island nke dị ihe dịka 414km tere aka Italytali.
… Obodo Barella bụ ebe mara mma maka njem nleta. Ruru ya nso n'ụsọ oké osimiri, ọ nwere ebe mara mma Marina jupụtara na ụlọ nri, na-agagharị na ụlọ ahịa. Kedu ihe ọzọ?… Ebe o si pụta bụ ụlọ Rom Amphitheater oge ochie.
Lelee mpaghara Marina (L) na Roman Amphitheater oge ochie (R) na Cagliari.
Nicolo Barella Football Akụkọ (Earlybọchị Mbido):
Onye na-egwu egwuregwu malitere njem ọrụ ya mgbe ọ na-elele afọ atọ na ọkara. N'oge ahụ, nna ya debara aha ya na Gigi Riva Football School, ebe akụkụ mmekọrịta na agụmakwụkwọ dị mkpa dị ka egwuregwu nke bọl n'onwe ya.
Nicolo Barella na nwata. Nwatakịrị nwoke ahụ nwere ike ịdata akara aka ya na-akpọ ya n'oge a.
N'ịbụ onye dị umeala n'obi, nwatakịrị ahụ mere ọtụtụ mgbalị iji sonye na ndị ọgbọ ya. Otú ọ dị, ihe ndọghachi azụ ya bụ n'eziokwu na ọ bụ nwata ihere. N'ihi ya, Barella achọghị ịjụ kpakpando ọkachamara kachasị amasị ya maka akwụkwọ ndekọ ha.
Nicolo Barella Ndụ Ndụ Ndụ:
Ka ọ na-erule oge ime ememme ncheta ọmụmụ nke iteghete ya, agụmakwụkwọ ya kwetara na ya dị njikere maka usoro ọzọ nke njem ndụ ya. N'ihi ya, ha sonyere ya na Cagliari Calcio otu ntorobịa na 2006.
N'ezie, nkwalite ya mere ka olileanya nke ndị mụrụ ya nwee obi ụtọ, bụ ndị kwenyere na Barella mụrụ na ọ ga-eme nke ọma na football. Ruo afọ itoolu sochirinụ, onye na-eto eto na-azụ ọzụzụ n'esepụghị aka iji mezuo ikike dribbling ya ma melite ume ya.
Nicolo Barella Bio - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe onye ọkpọ ọkpọ Italiantali gbanwere 18, ndị nkuzi otu ya enweghị ike ịgbanyụ anya n'egwuregwu bọọlụ ya. N'ezie, ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu abanyela na mma ya na pitch. N'ịchọ ijigide ihe omume ụmụaka ha, Cagliari nyefere Barella ọrụ mbụ ya na egwuregwu na Parma na Mee 2015.
Mgbe ọnwa ole na ole na-awụ akpata oyi n'ahụ ụwa site na mkpocha ya dị ọcha na nkwekọ bọọlụ, e zigara ya na Como na Serie B. subsequbọchị ọrụ ya ndị na-esote ya hụrụ otu usoro nke iwe iwe. N'ihi ya, onye na-egwu egwuregwu ahụ chọrọ Inter Milan mgbe Man United na-ele ọrụ ya anya.
Nicolo Barella Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
N'ụzọ dị mma, ọ hapụrụ akụkụ Serie B iji sonyere Inter Milan na nkwekọrịta ego mgbazinye afọ (yana ọrụ ịzụta na njedebe nke oge ahụ) na July 2019. N'ebe ahụ, o guzobere mmekọrịta siri ike na Marcelo Brozovic. Obi abụọ adịghị ya, mmetụta ya na ndị otu Milan guzobere ya dị ka kaadị opi na-adịghị ike Antonio Conte.
Ka m na-ede Bio a, Barella emezuola ọchịchọ nke ndị mụrụ ya site n'igosi ndị otu mba ya. Ọzọkwa, àgwà ya pụrụ iche na ịdị umeala n'obi emewo ka Milan mechie akụkụ ikpeazụ nke mmekọrịta ha na ya. N'ihi ya, onye na-eme ihe ga-eme ihe maka Nerazzurri ruo na June 2024.
Banyere nwunye Nicolo Barella - Federica Schievenin:
N'ezie, onye dribbler nwere nkà na-ele enyi nwanyị ya anya wee ghọọ nwunye dịka ihe kachasị mma iji jidere na ndụ. Ee! Barella emeela nke ọma na ndụ mmekọrịta ya ma e jiri ya tụnyere onye agbata obi ya, Alessandro Bastoni - onye ka alụbeghị di na Jenụwarị 2021.
Ka m na-ede Akụkọ Ndụ a, nwa mama midfielder, Federica Schievenin ekwuola Ee nye nnukwu ajụjụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ụmụ nnụnnụ hụrụ n'anya lụrụ na 2nd nke July 2018 na Villa D'Orri, nke dị kilomita 20 site na Cagliari.
Nicolo Barella na Federica Schievenin's Agbamakwụkwọ.
You maara?… Nwunye Nicolo Barella dị afọ 7 karịa ya. Kedu ihe ọzọ? Di na nwunye nwere ezigbo mmasị na ọgba tum tum dịka Daniele Rugani. Banyere afọ 2021, Barella na nwunye ya bụ nne na nna nke ụmụ atọ mara mma, ndị bụ Rebecca, Lavinia na Matilde. Nke a bụ nkọwa nke ezigbo ezinụlọ.
Taribo West Child Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
Enweghị mmetụta dị mma karịa ezinụlọ ya mara mma. Nicolo na nwunye ya (Federica) na ụmụaka - Rebecca na Lavinia. A na-ahụkwa Matilde.
Eziokwu Ndụ Nkeonwe:
Gịnị na-eme ka onyinye kpakpando thicktali buru ibu? Nke mbu na nke mmadu bu ngwakọta nke akara Aquarius zodiac. Inwe ezi obi n'eziokwu na imeghe ihe na-eme ka ọ dịrị Barella mfe isoro ndị otu ya na-akpakọrịta. Ọzọkwa, o nwere ụdị ọgba aghara nke na-enye ọfụma ikuku n'ebe ọ bụla ọ na-aga.
O nwere oge mgbe nne Barella na-eche ma ọ bụ nwata bụ onye ihere ọ zụlitere. Mgbe ọ bụla onye nwe obodo ahụ nwere onwe ya, ọ na-akpọrọ nwunye ya, Federica, na ụfọdụ ndị òtù ezinụlọ maka ịgagharị na ụbọchị snow.
Nicolo na Federica na-enwe obi ụtọ njem njem ihu igwe.
Si ebi ndụ na Net Worth:
Site na ụgwọ ọnwa ya nke € 4.6 Million (2021 Stats), Barella azụrụ ụlọ dị oke ọnụ nke nwere ụdị ime ụlọ izizi. N'ezie, akụ ya ga-agụnye ụfọdụ ụgbọ ala mara mma nke a na-ahapụghị aha na ibe nke akaụntụ mgbasa ozi ya. Ka m na-ede Bio a, Nicolo Barella nwere Net Net nke € 4 Million (2021 Stats).
O nwere ụlọ dị jụụ nke nwere ọmarịcha ime ụlọ.
Maara otu?… Onye nyere gị aka ka Chelsea nyefee ya ihe na 2019. Agbanyeghị, ọ jụrụ onyinye ahụ n'ihi ihe ezinụlọ. Eziokwu bụ, ọ na-ejide echiche nke echiche ya na ekele dị ukwuu. N'akụkụ a, anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara ezinụlọ ya dum.
Banyere Nna Nicolo Barella:
N'ime oge njem ndụ ya niile, onye nwere ahụmịhe na-ahụghị nna ya dị ka arịlịka na-egbochi ya. Mana ọ na-ele nna ya anya, (Luca Barella) dị ka ìhè na-eduzi nduzi nke ịhụnanya ya na-egosi ya ụzọ ịga nke ọma. Ọ bụ Luca ka nwa ya nwoke debanyere aha ya n'ụlọ akwụkwọ bọl mgbe ọ dị obere.
Luca bụ ọkpụkpụ azụ nke njem nwa ya nwoke.
Banyere nne mama Nicolo Barella:
N'aka ekpe ya na nne ya, Barella gaara agba bọl basketball kama ịgba bọl. Agbanyeghị, mgbe nwa ya nwoke họọrọ bọọlụ karịa egwuregwu ọ bụla, ọ mechara kwado ọrụ ya. N'ezie, nne Barella na-agba mbọ ime ihe kacha mma maka nwa ya, n'agbanyeghị ihe ọ ga-esi na ya pụta.
Zute nne Barella. Ọ na-akwado mkpebi ya kemgbe ọ bụ nwata.
Banyere ụmụnne nwanne Nicolo Barella:
Akara Italian nwere ọmarịcha nwanne nwanyị aha ya bụ Martina Barella. Obi abụọ adịghị ya na o jirila oke ịhụnanya gosi nwanne ya nwoke naanị ya kemgbe ha bụ ụmụaka. Ruo oge, Barella na nwanne ya nwanyị na-aga n'ihu na-akwado ibe ha maka mbọ onwe ha.
Nwanne ya nwanyị nke nta, Martina, bụ otu n'ime ihe ndị kpatara na ọ nweghị mgbe ọ bụ nwata na-agwụ ike.
Banyere ndị ezinụlọ Nicolo Barella:
N'ihe dị ka ezinụlọ ya na-anya isi maka ihe ọ rụzuru na njikọ ndị Itali, enweghị ozi gbasara nna nna ya na nne nne ya. Ka m na-ede Bio a, ọ dịghị ihe e kwuru banyere nwanne nna Barella, nwanne nne ya na ndị ikwu ya dị anya.
Nicolo Barella Eziokwu Eziokwu:
Iji kechie Transistor Radio's Biography, ebe a bụ eziokwu ole na ole banyere ya ga-enyere gị aka ịmatakwu akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Nicolo Barella Salary Breakdown and Enweta Ego Na Nke Abụọ:
Enweta ego na Pound (€)
Kwa Afọ € 4,600,000
kwa ọnwa € 383,333
Kwa Izu € 88,326
Kwa .bọchị € 12,618
Kwa elekere € 526
Kwa Nkeji € 8.8
Kwa nke abụọ € 0.15
Nnyocha na-egosi na nwa amaala Italiantali ga-arụ ọrụ maka afọ 12 iji rite ihe Barella na-enweta n'otu ọnwa.
Anyị etinyela nke ọma na nyocha gbasara ụgwọ ọnwa ya. Chọpụta n'onwe gị ego Barella rụpụtara kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Nicolo Barella's Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Inter.
Eziokwu nke 2: Ihe kpatara Nicolo Barella aha otutu:
N'ihi ịdị ukwuu ya, Barella na-emekarị ka ọ bụrụ onye na-achị ọchị n'oge ngalaba ọzụzụ. N'ihi ya, onye otu ya kpọrọ ya aha "transistor redio”. Agbanyeghị, agwa okwu ya na-agbanwe mgbe ọ bụla ọ banyere n'olulu ahụ.
Eziokwu nke 3: Nicolo Barella Okpukpe:
O doro anya, ọ bụ n'etiti ndị egwuregwu na-enweghị ike ikwu okwu banyere okwukwe ha. Otú ọ dị, ọ bụ Onye Kraịst nke hụrụ na ọ na-akwado nkuzi na koodu nke omume nke okpukpe ya.
Eziokwu nke 4: Forhụnanya maka anu ulo
Ikekwe ị maghị na Barella na nwunye ya nwere otu ihe ma ọ bụ abụọ maka nkịta. N'ezie, ndị di na nwunye nwere nkịta nke ha ji kpọrọ ihe nke ukwuu. Mgbe ụfọdụ, onye na-ebu ya na-ebugo onyonyo ya na anụ ụlọ ya na soshal midia.
Eziokwu nke 5: Ntughari Nicolo Barella:
Onye na-eme egwuregwu na-ahụkarị n'anya na-amasị ya. Ka m na-ede ihe ndekọ a, Barella abanyela na tattoos atọ na ahụ ya. Ihe kachasị ama ama n'etiti egbugbu ya bụ nke dị na ubu aka ekpe ya. O nwere ihe e dere ede; Minhas Familia ea Minha Vida, nke putara na ezi n’ulom na ndu m.
Eziokwu nke 6: Rkpụrụ nke FIFA:
Enwere ọtụtụ ndị na-enyocha egwuregwu na-atụle ụdị egwuregwu Barella na nke Steven Gerrard. N'ụzọ na-akpali mmasị, ya dribbling, Ball Control, na ume ya emeela ka ọ nweta nchịkọta nke 81 na atụmanya nke iru 88 n'oge na-adịghị anya. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ onye ọkpụkpọ egwu dị egwu onye ọ bụla nwere ike iji na egwuregwu vidio kachasị amasị ha.
N'agbanyeghị aro nne ya kwuru, Barella ka maara ihe ọ chọrọ iji ndụ ya mee. N'ihi ya, ọ gbasoro nrọ ya ma taa ọ ghọọla talent iji lelee n'otu n'ime Njikọ European kacha elu.
Ọ dị anyị mkpa ịja obi ike nke ndị mụrụ ya, bụ ndị mere ka ọ hụ na ọ nweghị ihe ọ bụla ngwaọrụ ọ chọrọ maka mbọ bọl ya. Ha egosiwo na obere omume obiọma pụrụ ịbụ mkpali kasịnụ nwatakịrị pụrụ inwe n’ezinụlọ.
Daalụ maka ịgụ Nicolo Barella Life Story. Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na isiokwu anyị. Ọzọkwa, lee nchịkọta nke akụkọ ndụ ya na tebụl wiki n'okpuru.
Aha n'uju: Nicolo Barella
aha otutu: Transistorọ Redio
Age: 24 afọ na ọnwa 3.
Ebe amụrụ onye: Cagliari, Italytali
Nna: Luca Barella
Ụmụnne: Martina Barella
Nwunye: Federica Schievenin
Children: Rebecca, Lavinia na Matilde
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 4.6 Nde (2021 Ọnọdụ)
Ezigbo Net: 4 Nde (2021 Ọnọdụ)
elu: 1.72 m (5 ft 8 na)
Bọchị agbanweela: Machị 31, 2021
Bọchị agbanwee: Disemba 20, 2020